Wafdi ka socday EU oo booqday Puntland - BBC Somali
Wafdi ka socday EU oo booqday Puntland
Image caption Madaxweynaha Puntland oo sii sagootinaya wafdiga EU
Wafdi ka socda qaar ka mid ah safaaradaha dalalka Midowga Yurub ay ku leeyihiin magaalada Nayrobi ayaa ka ambabaxay Magaalada Garoowe halkaas oo ay ku tageen booqasho hal maalin qaadatay, intii ay halkaas joogeena waxay la kulmeen madaxda sare ee Puntland iyo xubno ka tirsan golayaasha dawladda.
Labada dhinac ayaa la sheegayaa inay ka wada hadleen arrimo kala duwan oo la xiriira xagga nabadgelyada iyo dhaqangelinta qaab wadashaqayn cusub o yeelan doonaan mustaqbalka kaas oo saldhig u noqon doona hirgelinta mashaariicda xagga horumarinta la xiriira ee dalalka midowga Yurub ka qaban doono Puntland.
Wafdiga ka socday safaaradaha dalalka midowga Yurub ee yimi Garowe waxay ka koobnaayeen safiiradda dalalka Talyaaniga, Spain, France, Belgeium, Finland iyo xubin kale oo ka socota midowga Yurub, waxana weheliyay qunsulka safaaradda Soomaalidu ku leedahay Max’ed Cusman Aadan Edson.
Intii uu wafdigani joogay magaalada Garowe wuxuu fadhi la qaatay Madaxwaynaha Puntland iyo ku xigeenkiisa oo ay wehliyaan xubno ka tirsan golayaasha dawladda Puntland halkaas oo looga hadlay qaab wadashaqayn oo mustaqbalka ay yeelan doonaan labada dhinac.
Kulankii ay wafdiga iyo dawladdu ku yeesheen madaxtooyada oo ahaa mid albaabku u xiran yahay ayaan waxaa warbaahinta u faahfaahiyay qunsulka safaaradda Soomaalidu ku leedahay Kenya Max’ed Cusmaan Edson. Qunsulku wuxuu tilmaamay in kulanku uu yahay mid looga hadalay sidii loo samayn lahaa wadashaqayn cusub oo ka duwan sidii hore taas oo lagu doonayo inay sii xoojiso xiriirka labada dhinac.
Arrimaha ugu muhimsan ee kulankan lagu soo qaaday ayaa waxaa lagu tilmaamayaa wixii hadda ka dambeeya in maamulka Puntland iyo dalalka ay ka socdaan safiirada iyo guud ahaan midowga Yurub ay yeelan doonaan wadashaqayn toos ah taas oo lagu fasiray in dalalka midowga Yurub ay goobjoog ka noqon doonaan xaaladda Puntland iyo mashaariicda ay ka qabanayaan.
Image caption Wafdiga Midowga Yurub oo kulan la leh madaxda Puntland
Kulankii Madaxtooyada ka dib wafdigu wuxuu ka qaybgalay qado-sharaf loogu sameeyay dooxada Salaxley oo magaalada Garowe koofur ka xigta 15km taas oo waqtigan ku jirta xilli barwaaqo ah oo barwaaqada iyo dooggu ay yihiin kuwo muujinaya raadka ay ka tageen roobabkii laxaadka lahaa ee gugaan ka da’ay gobolka.
Madaxwaynaha Puntland Cabdiraxmaan Sh.Max’ed oo warbaahinta la hadlay intii la joogay dooxada Sallaxley ayaa faahfaahin kooban ka bixiyay natiijadii ka soo baxday waxyaabihii ay tooska isula soo qaadeen wafdiga iyo dawladda wuxuuna sheegay inay ka wada hadleen baahiyaha ka jira Puntland oo ay hordhigeen iyo hadda wixii ka dambeeya in labada dhinac ay is dhaafsan doonaan wafdiyo isdabajoog ah.
Socdaalka wafdiga ayaa la sheegayaa inuu dabajoogay kulan ay dhowaan magaalada Nayrobi ku yeesheen Madaxwayne Cabdiraxman Sh. Max’ed iyo isla xubnaha wafdigan iyo safaarado kale oo iyana ka socday midowga Yurub oo fadhigoodu yahay magaalada Nayrobi.
Maamulka Puntland ayaa marar kala duwan ka hadlay in kaalmada dawladaha iyo ururrada caalamka ee caawiya Soomaaliya inteeda badani aan si wanaagsan loo maamulin oo aanay soo dhaafin Nayrobi taas oo maamulku dadaal ugu jiro inuu hoos u dhigo saamaynta ay arrintaasi ku yeelatay hawlaha mashaariicda.
Kulankii labada dhinac ee ka dhacay dooxada Sallaxley waxaa kale oo ka qaybgalay qaar ka mid ah madaxda dhaqanka oo ay ka mid ahaayeen Suldaan Siciid Max’ed Garaase, Islaan Ciise Islaan Max’ed, Garaad Cabdullaahi Cali Ciid iyo Suldaan Siciid Irbad waxayna madaxda dhaqanku ay wafdiga uga warrameen xaaladda dhabta ah ee ka jirta Puntland iyo kaalinta dalalka caalamka kaga aaddan wax ka qabadka baahiyaha kala duwan ee gobolka ka jira.
Wafdigu isla shalay gelinkii dambe ayuu dib ugu noqday xarunta dalka Kenya ee Nayrobi oo markii hore uu ka soo duulay waana markii ugu horraysay ee wafdi noocaan ah oo ka socda dalalka midowga Yurub uu mar keliya soo gaaro magaalada Garowe.